ReactOS 0.4.4: yakavhurika-sosi Windows inovandudzwa | Linux Vakapindwa muropa
Takatotaura kakawanda pamusoro pazvo ReactOS, uye hukama hwahwo hwave hune mamwe mapurojekiti makuru atinoziva kwazvo muLinux nyika, seWine. Mune ino kesi, haisi Linux-based inoshanda sisitimu, asi sisitimu yakagadzirirwa kuva diki inoenderana neMicrosoft Windows software, uye zvakare yakavhurika sosi. Pane ino chiitiko tinozivisa kuti iyo ReactOS 0.4.4 vhezheni yasvika.
Iko kunonoka asi kwakachengeteka kuvandudza kweReactOS kunotiunzira zvimwe zvinhu zvitsva zvichienzaniswa neshanduro yapfuura. Iye zvino iyi vhezheni yasvika mushure mevhiki rekupedzisira kugadzirisa kugadzirisa pabazi re 0.4 rakagadzikana reReactOS, nekugadziriswa kwesisitimu, rutsigiro rwuri nani rwezvimwe zvikumbiro, nezvimwe. Saizvozvo, inosimuka ReactOS vhezheni 0.5 iyo inoitirwa kutiunzira isu kutarisa kwakafanana kuWindwos Vista.
Izvo zvichave zvekutenda kuma msstyle, akagoneswa nemupiro anonzi Giannis. Iyo yekuvandudza nharaunda inobatanidzwa muchirongwa ichi iri kugadzirira kuburitswa kwe0.5 nepo kwechinguva chatinogona kunakidzwa iyi imwe yapfuura vhezheni. Isu tinongofanirwa kuenda ku zviri pamutemo webhusaiti y download isu yemahara iyo system mufananidzo, iri diki chaizvo muhukuru, uye inopesana zvakanyanya nehukuru hweMicrosoft Windows vhezheni.
Zvishoma zvekuwedzera, chete kana iwe uri wekuda yemahara uye yakavhurika sosi software, asi iwe unofanirwa kushandisa imwe application kana vhidhiyo mutambo inoenderana chete yeMS Windows, unogona kuiwana ReactOS, kunyangwe zvimwe zvirongwa kana mitambo yemavhidhiyo isingashande nemazvo seWine. Uye ini ndinopedzisa nechimwe chinhu chandinogara ndichiyeuka, chinogona kushandiswa sechinhu chekudzidza, sezvo iri yakavhurwa sosi uye iwe unogona kuferefeta kuti uzive zvishoma nezve mashandiro anoita Windows.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » ReactOS 0.4.4: yakavhurika-sosi Windows inovandudzwa
ok probe open suse, ubuntu, mint uye zorin uye mune ese ari mana matipi ekuendesa 25000 mafoto kubva usb kuenda kumifananidzo zvinotora maawa matanhatu paavhareji kuve kuti mumawindows zvinotora maminetsi gumi kusvika gumi nemaviri, ini ndakaita chimwe chinhu chisina kunaka kuisa kana kuda rumwe rubatsiro. ?????
Rima mambo akadaro
Nei mubvunzo pano?
Chimwe chinhu chausinga taure nezvese ari maLinux neWindows masisitimu. Zvakare, ini handifunge kuti iwo huwandu hwemifananidzo hunopfuudzwa neWindows panguva iyoyo. Zvakare chengetedza mupfungwa kana zvese zviri zviviri USB nemidziyo yaunovapfuudza iri USB 3.0 nekuti kana ari akasiyana michina uye imwe iine USB 2.0 hapana kuenzanisa. Kana semuenzaniso kana iwe ukashandisa teracopy neWindows.
Pindura kuna Rima Mambo
ok Rima King windows 10 ine amd A4 t mamaboard asrock fm2a58m-vg3 + 2.0 4gb ndangariro uye yemindi sarah 18, zorin os12.1, ubuntu 16.04 uye opensuse usatarise kuti ndeipi vhezheni yacho, amd athlon 5350 t mamaboard asus am1m- ine 6gb yekurangarira kana iwe uchikwanisa kunditungamira nekuti ini ndiri mutsva ku linux pamberi pekutenda.
Iwe unofanirwa kutsanangura zvirinani iyo processor vhezheni uye kana iyo S: O. i32 kana 64 bit.
Nezve processor ini ndinokutumira iwe muenzaniso wekuenzanisa kunyangwe ini ndisingazive kana iwo mavhezheni aunawo.
Nezve bhodhi, unofanirwa kuona kuti wapasa iwo maviri aine USB imwechete, semuenzaniso USB 2 mune zvese kana USB 2.0.X mune zvese. USB 3.X ndiyo yebhuruu. Uyezve ita chokwadi chekugadzirisa zvese OS usati wateedzera chero chinhu.
Uye kushandisa akadeerwa kukopa kune yega yega yeOS, Semuenzaniso hazvishande kana ukateedzera muWindows neTeracopy nekuti inoteedzera nekukurumidza.
Semuenzaniso enzanisa ma processor
MirageOS: raibhurari yekuvaka unikernels